Polina Yumashev (Deripaska) - yezindawo ezidumile VIP-abantu eRussia. Yena kusuka ebuntwaneni esasikuyo manje nayo yayibiyelwe osaziwayo futhi ubuhlobo abameleli edume kunazo ibhizinisi Russian kanye nezombusazwe. Kulesi Pauline neze Playgirls ngokunganaki, njengoba iminyaka eminingi ukwakha i-career kwizimboni ibhizinisi ukushicilela futhi baphumelela.
Polina Yumashev wazalwa Januwari 11, 1980 eMoscow. Uyise - Valentin Ivanov, wafika e-inhloko-dolobha Perm nesikhombisa umfana, futhi kusukela ngo-1976 uye wasebenza iphephandaba "I-Komsomolskaya Pravda", ukuqala umsebenzi wakhe ehambisa izincwadi. Ngo-1987, Yumashev wajoyina umagazini "Ogonyok", lapho eseneminyaka umhleli iPhini abakhulu 1991-1995, futhi 1995-1996 kwaholela edition umsebenzi kwalesi izincwadi owaziwa.
Ngo-1996, unyaka Valentin Yumashev waqokwa umeluleki kuMongameli Yeltsin, futhi ngemva konyaka - inhloko nohulumeni wakhe.
Pauline Abazali bahlukana lapho yena esewusana, kodwa Valentin Borisovich uye wasekela njalo le ntombazane. Ngo-2002, ubaba ngishade Tatyana Dyachenko - Borisa Eltsina indodakazi. Usingamama iphathwa ukuze impela nendodakazi esekhulile banobungane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma isithombe ngokuhlanganyela nendodakazi yakhe Iriny Vedeneevoy - umama Poliny Yumashevoy - atholakala cindezela kuba cishe engenakwenzeka, izithombe esibonisa intokazi Dyachenko, ebonakala ngokuphindiwe emakhasini omagazini ecwebezelayo, etshela ngokuphila we "abacebile nosaziwayo."
Valentin Borisovich lomshado nendodakazi nguMongameli wangaphambilini we Russian Federation senzeka ngo-2002. Ngokushesha ngemva kwalokho, Yeltsin zanquma ukulishiya okuthunyelwe umengameli futhi umemezela ukuthi kumabonakude, ukufunda inkulumo eyabhalwa speechwriter zalo ezinde futhi manje Nouveau umukhwe.
Umama Pauline - Irina Vedeneyeva, yena ngisebenze njengomqaphi intatheli. Kwaphela iminyaka eminingi wayengumhlali umlobeli okukhethekile iphephandaba "Moskovsky Komsomolets" futhi "Ezemidlalo namaSoviet". Futhi yena nomyeni wakhe yena wake wabhala layala ifilimu mayelana neqembu "Ukucinga" Boris Grebenshchikov futhi K. UNicholas. Isithombe wangena 1988 futhi wabizwa ngokuthi "The ngoma wedwa." Yena edabukile kokuhlukana Valentin futhi ungalokothi bashada okwesibili.
Kwake kwathi ngo-2002 Dyachenko wanika uRaheli indodakazi Valentin Yumashev kukaMaria, kwabikwa ukuthi Irina Vedeneyeva Futhi ukhulelwe. Eminyakeni 45, owesifazane ebeletha indodana enesisindo 920 kuphela wathi wanikela IVF kanye nazo zonke izindleko sokubelethisa futhi banakekele abagulayo wathatha phezu uPolina. Ngemva kwalokho umama nendodana, wasenyamalala emehlweni izintatheli.
Polina Yumashev wakhula ingane asebenzayo. Njengoba iminyaka 4 yena eyingoduso enkulu ithenisi. Nokho, ngemva ukulimala emuva le ntombazane yayingakaze eminyakeni embalwa ukuba bangayeki ezemidlalo. Eminyakeni 16, uPauline wathunyelwa UK ukufunda e-Faculty eSikole eziphambili Economics MILFIELD, lapho ngaleso sikhathi zazifunde umzukulu kamengameli B. L. Eltsin futhi Aleksey Chubays. Zonke izindleko imfundo amantombazane wathatha phezu uyise.
Kamuva uPolina iziqu eMoscow State University kanye HSB esebenza ngaleso eMoscow State University nge lunye "Management". Njengoba umfundi, waphinde wathatha i tennis ngisho kwaba yingxenye yeqembu intsha kazwelonke.
Ngo kowezi-2000, Roman Abramovich, Valentin Yumashev bajwayelane okubanjiswene naye ebhizinisini lakhe Oleg Deripaska. Lesi sakamuva ngaleso sikhathi kwaba kancane phezu 30. Naphezu ayesemncane, Deripaska iye njengelinye lamazwe ethembisayo osomabhizinisi Russian kanye abafanelekile kakhulu suitors zwe. indodakazi Elihle komngane entsha ngokushesha yabakhanga usomabhizinisi. Abantu abasha baqala ukuhlangana, futhi ngo-2001, ngemva inoveli iDemo uPolina Yumashev futhi Oleg Deripaska washada.
Khona-ke, abaningi wakhuluma iqiniso ukuthi kwaba nobukhazi lula. Ngokusho amahlebezi, okuyinto iqhubeka ziphindaphindwe tabloids, uPolina Yumashev - indodakazi Valentin Yumashev - washada ngesikhathi ekufuna of kayise, ukwakha clan enamandla zezimali kanye nezombusazwe. Umyeni wakhe wayengekho futhi ngiyisehluleki, ngoba kwaba kwezinye degree Borisa Eltsina umzukulu, ngokuletha ngaleyo ndlela uxhumano zabo buholi betepolitiki izwe ezingeni elisha.
Naphezu kwazo zonke lezo izibikezelo negative, umshado sasinamandla kangangokuba sonke, lo mbhangqwana maduze ukugubha iminyaka engu-16 yokuphila kwabo ndawonye.
Polina Yumashev, kufakazelwa umlando wokuphila Eminyakeni yokuqala, usuwazi, okwamanje umfazi omunye abantu waseRussia acebe. Phela kweminyaka ethile beshadile Oleg Deripaska sanda ngokuphindiwe Engcebweni yakhe. Kusukela ngomhla ka-2016, wathatha 41 endaweni th ku simo 200 osomabhizinisi ezinonileyo ezweni lethu. Kuleli zinga Deripaska kuyinto 2.1 bhiliyoni aseMelika, futhi uye eside yena wadutshulwa udumo osomabhizinisi kanzima futhi abazinikele eziningi ucingo hhayi kuphela njengoba aluminium magnate. Ngaphezu ukukhiqizwa izinsimbi non-ayoni, indawo isithakazelo Deripaska ihlanganisa ingcebo, kanye sezindiza, umshwalense, ezolimo kanye nezinye izinhlobo amabhizinisi.
Ukuze credit yayo, Heroine kwalesi sihloko, mangisho ukuthi ngaye okwesikhathi eside kwakungekho muntu owakhuluma njengoba indodakazi fike of labo seduze Borisa Eltsina nomkakhe oligarch Oleg Deripaska.
Kuze kube manje, uPolina yena anganikeza bakuthole bona nezingane zabo. Lena akuyona ukuphika ukuthi kwakuyizwi umyeni kwamsiza ukuba ukuziqalela amabhizinisi abo. Ngenxa capitals yomyeni wakhe 2006, njengoba umama wezingane ezinhlanu indodana eneminyaka emithathu ubudala uPetru nendodakazi Mary, Yumasheva Deripaska enganyelwe edishini ethandwa "Ovva Cindezela", "Interior + Design" futhi "futhi pipsqueak wami". Kamuva ephethwe i-Phambili Media Group eBhodini Labaqondisi. Le nkampani kuletha umndeni Pauline mayelana $ 10 million njalo ngonyaka.
Umsebenzi Poliny Yumashevoy
Ukuze uthuthukise isimo sezimali Pauline Yumasheva inkampani yabo ukushicilela ivaliwe omagazini lake inzuzo uSandra "Valea Valentine." Kunalokho, baqala ishicilelwe 3 kwizihumusho ezintsha Car, Indaba, futhi uMbuso.
Okwamanje, uPolina Yumashev nentombi yakhe, owaziwa socialite futhi ibhizinisi owesifazane Zhukov, ungumnikazi "Inethiwekhi" umagazini othile owaziwa kakhulu futhi inzuzo "Inhlebo." Ngaphezu kwalokho, abesifazane imali inthanethi yephrojekthi Bondarchuk, yinhlangano zokuxhumana ngoba ifilimu buffs nabenzi bamabhayisikobho.
Lokho Pauline ekutshela ngaye
Yumasheva-Deripaska akuyona umthandi olukhulu izingxoxo. Ngokusho kwakhe, ngokuvamile evuka at 9 ekuseni ngaphambi kokuya endlini ukushicilela, ukuthandwa ukuqhuba yoga ihora. Ngakho-ke igcina injalo ngokomzimba futhi uthulisa impumuzo.
Intokazi iyincithakalo ecasulayo kakhulu isikhathi esiminyaminyeni sezimoto. Lena inkinga ngaphambi Yumasheva sibi kakhulu, njengoba uhlala ruble ophambili umsebenzi uya maphakathi nenhloko-dolobha.
Pauline uyazicabangela umsebenzi kuyingxenye ebalulekile yokuphila lakhe futhi uthi uyawuthanda ukudala amanye amaphrojekthi amasha.
Izintatheli zihlale abanesifiso sokwazi ngalokho nengxenye ezindabeni umngane womshado Yumasheva. On lo mbuzo ngesikhathi enengxoxo, uPauline ukuthi ngezinye izikhathi Oleg Deripaska uyambuza ukusebenza endlini ukushicilela, kodwa yena ozama uthintane naye baphindze basombulule tinkinga bebodwa. Le ndlela efanayo isetshenziswa maqondana inhlokomo yasekhaya, uzama "musa ukulayisha" Indoda, Wathi, futhi ngaphandle eziningi izinkinga.
Polina Yumasheva (bheka isithombe ebusheni bakhe. Ngenhla) nomyeni wakhe ekuphileni komkhaya wakubo kwakungenjalo ngaso sonke isikhathi bushelelezi. Ikakhulukazi, ekupheleni "zero" endabeni Olega Deripaski usufinyelele ngokucijile. Umkhaya ngisho kwadingeka ukuba esikhundleni ngamaholide bendzabuko Riviera French ukuba bamukela uhambo oluya Krasnodar esifundeni, lapho babe khona abantwana wayehlala nonina kule ndawo Cossack. Futhi Deripaska akazange sebeya, njengoba ematasa ukuxazulula Rusala izikweletu ukuze axazulule le ngxabano nge "Alfa-Bank."
Ngisho ngemva kokubuya izingane kanye bomshado of inhlokodolobha uPolina Deripaska wahlangana njalo futhi, ngokuvumelana Yumasheva abangane, amahlazo njalo. Ngaphezu kwalokho, amahemuhemu ayesakazwa ukuthi ukunganakwa olokhu matasa umyeni Pauline wanquma nxephezela, inhloko wathandana heartthrob ezidumile ochumayo Aleksandrom Mamutom. Lesi sakamuva waziwa ngokuba isizathu kwesehlukaniso, abesifazane okungenani ababili abaziwayo.
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, uPolina futhi Oleg Deripaska bahlala ndawonye. Kwakuthiwa wentombi ukubhubhisa umndeni akazange avumele ozithandayo wakhe nosingamama Tatyana Dyachenko. Ngemva nje kancane kwalokho, lo mbhangqwana ngokwabo baye ngenkuthalo ukuphika ukuthi ukhona yini izinkinga sphere womshado zathi ze fanele phi inhloso ukushiya.
Manje uyazi ukuthi ubani lo uPolina Yumashev. Lona wesifazane osemusha kuhlukile abesifazane abaningi, wethiwa abantu Rublevskaya abafazi, futhi ufuna eziphakemeyo ibhizinisi, wazi ukuthi intsha nobuhle Akayena okuphakade.
Indishi ephelele sasekuseni ngeSonto: fritters of zucchini nge garlic noshizi